हिमाल खबरपत्रिका | संयुत्त सैन्य अभ्यास किन ?
संयुत्त सैन्य अभ्यास किन ?
संयुत्त सैनिक अभ्यास मार्फत भारतले चीन र पाकिस्तान विरुद्घ सैनिक गठबन्धन शुरू गर्‍यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ।
काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बिम्स्टेक सम्मेलन (१४–१५ भदौ) हुनुअघि नै संयुक्त सैन्य अभ्यासको मिति टुंगो लगाउने बैठकमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारीलाई भाग लिन लगाइएको थियो । यो सैन्य अभ्यास बिम्स्टेक सचिवालयको नभई भारतीय सेनाको विशेष पहलमा हुन लागेको हो । बिम्स्टेक सम्मेलनअघि यसबारे त्यति चर्चा थिएन । बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सैन्य अभ्यास’ बारे बोलेपछि यो अभ्यास चीन र पाकिस्तान विरुद्ध लक्षित भएको भन्दै नेपालमा बहस चुलियो । पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावलदेखि नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरूले समेत सरकारको आलोचना गरे । संसदमा चासो व्यक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यो युद्धकेन्द्रित नभई सिकाइकेन्द्रित छ’ भन्ने जवाफ दिनुपर्‍यो ।
संघीय संसदले ३ भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार सांगठनिक अपराध र अवैध लागूऔषध ओसारपसार सम्बन्धी बिम्स्टेक सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । यसको अर्थ, बिम्स्टेक राष्ट्रबीच आतंकवाद नियन्त्रणमा सहकार्यको स्वीकृति संसदबाटै भएको छ । प्रतिआतंकवादमा सैनिक परिचालनदेखि गुप्तचरी सूचनाको आदान–प्रदानसम्म पर्छ । पछिल्लो समय प्रमुख कूटनीतिक विषयका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास आमरूपमै प्रचलित छ । २०७२ सालको भूकम्पका बेला उद्धारका लागि आएका बहुराष्ट्रिय सेनाले नेपाली सेनाको कमाण्डमा उद्धार मात्र गरेनन्, सैन्य अभ्यास पनि भए । जसमा चीन, भारत र अमेरिकाका सेना पनि सहभागी थिए ।
नेपाल र चीनबीच उद्धार व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवाद विषयमा वैशाख २०७४ देखि संयुक्त अभ्यास हुन थालेको हो । गत वर्ष ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप–१ संयुक्त सैनिक अभ्यास’ काठमाडौंको प्यारागणमा भयो । कम्पनीस्तरमा हुने भनिएको अभ्यासलाई पछि सेक्सनस्तरमा झरिएको थियो । यसपालि असोज १ देखि ७ गतेसम्म संयुक्त सैनिक अभ्यास चीनको छेन्दुमा हुँदैछ । नेपाल–चीनबीचको सैनिक अभ्यासबारे भारतीय मिडियामा कुरा उठ्दै आए पनि भारत सरकारबाट औपचारिक रूपमा चासो व्यक्त भएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच १४ र १५ वैशाखमा हुपेई प्रान्तको उहानमा अनौपचारिक शिखर वार्तापछि दोक्लाम सैनिक तनावपछि चिसिएको चीन र भारत सम्बन्धमा निकै सुधार आएको छ । त्यही बीचमा नेपालबारे चिनियाँ नीतिमा ‘दुई प्लस एक’ अवधारणा विकास भयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली वैशाखमा चीन भ्रमण जाँदा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले पहिलोपल्ट उक्त अवधारणा ज्ञवालीसमक्ष सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो (५–१० असार) भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले त्यो अवधारणा नेपाली पक्षलाई पुनः सुनाए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालको विकासमा भारतीय सहमति खोज्ने चिनियाँ नेतृत्वलाई बिम्स्टेक सैनिक अभ्यासबारे कुनै चिन्ता नहुन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अन्ध राष्ट्रवादी नीतिले चीन र भारत व्यापारिक रूपमा झ्न् नजिक बन्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिका प्रवेश हुने चिनियाँ उत्पादनमा ट्रम्प प्रशासनले चर्को भन्सार शुल्क लादेपछि चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमा त्यसै गरेको छ । यसकारण अमेरिकी कृषि उत्पादनको चीनमा आयात बन्दप्रायः भएको छ । यो चीन–अमेरिका व्यापारिक युद्धको फाइदा भारतलाई हुने विश्लेषण गरिंदैछ । अब चिनियाँ बजारमा अमेरिकी कृषि उत्पादनलाई भारतीय कृषि उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना बढेको विश्लेषण चिनियाँ मिडियामा गर्न थालिएको छ ।